Tag: clipsync | Martech Zone
Tikniyoolajiyadda fiidiyowga ayaa cirka isku shareeray… laga soo bilaabo muuqaalka isha, illaa shaashadaha waaweyn, illaa 3D, AppleTV, Google TV… dadka ayaa wadaagaya oo cunaya fiidiyowyo aad u tiro badan abid taariikhda. Kordhinta kakanaanta ayaa ah shaashadda labaad - oo la macaamilaysa kiniin ama qalab mobile ah inta aad telefishanka daawaneyso. Tani waa soo bixitaankii SocialTV. In kasta oo daawadayaasha telefishanka dhaqankoodu hoos u dhacayaan, haddana SocialTV wuxuu muujinayaa ballanqaadyo badan. SocialTV wuxuu sii kordhinayaa daawashada, caawinta dallacaadda iyo xitaa wadista
Haddii aanan haysan wax aan ku qoro boggeyga, sida caadiga ah waxaan sameeyaa xoogaa baarin ah oo aan ka helayaa xiriiro aan caadi ahayn oo aan kuwaa la wadaago. Haddii aad waqti siineysid inaad ku laabato degelkeyga ama aad uqorto quudintayda, waxaan rabaa inaan hubiyo inaanan waqtigaaga kaaga luminayn nus-ka-sheegashada boostada. In kasta oo dadaalkaygu jiro, qaar ka mid ah qoraalladaydu waa istiinyahanno kuwa kalena waxay helayaan taxaddar badan. Ka dib markii blogging sannado hadda,
Kuwa idinka ah ee muddo dheer wax akhriyayay, waxaad ogaan doontaan inaan ka saaray widget-yada MyBlogLog iyo BlogCatalog. Waxaan ku dhibtooday inaan ka saaro iyaga in muddo ah. Waan ku riyaaqay inaan arko wejiyada dadka waawayn ee booqda barteyda badanaa - waxay ka dhigtay akhristayaasha inay umuuqdaan dad dhab ah halkii ay ka noqon lahaayeen tirakoobka Google Analytics. Waxaan sameeyay falanqeyn buuxda oo ku saabsan ilo kasta iyo sida ay ugu kaxeeyeen taraafikada degelkeyga iyo sidoo kale